आज परेको माग्नेको जन्म दिनमा धुर्मुसले पुरानो फोटो फेसबुकमा हाल्दै लेखे यस्तो भाबुक शब्दहरु … – PathivaraOnline
Home > समाचार > आज परेको माग्नेको जन्म दिनमा धुर्मुसले पुरानो फोटो फेसबुकमा हाल्दै लेखे यस्तो भाबुक शब्दहरु …
आज परेको माग्नेको जन्म दिनमा धुर्मुसले पुरानो फोटो फेसबुकमा हाल्दै लेखे यस्तो भाबुक शब्दहरु …
माग्नेको जन्म दिनमा धुर्मुसले पुरानो फोटो फेसबुकमा हाल्दै लेखे यस्तो भाबुक शब्दहरु …
राजा महेन्द्रभन्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली शक्तिशाली, यस्ता छन् केपी ओलीले गरेका महान कामहरु …
चीनसँगको नेपालको निकटताबाहेक अरु धेरै चासो नराख्ने भारतीय नेता, कुटनीतिज्ञ र पत्रकारहरुको जिज्ञासाको पाटो यसपटक अलि फराकिलो भएको छ ।
नेपालमा बढ्दो चिनियाँ प्रभावबाहेक अरु विषय पनि अब नेपाल मामिलाका जानकार भारतीयहरुका लागि जिज्ञासा बन्न थालेका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजकीय भ्रमणका क्रममा औपचारिक र अनौपचारिक कुरा गर्ने क्रममा उनीहरुले नेपाली प्रतिनिधिमण्डलका सदस्यहरुसँग सोधेको प्रश्न थियो- ओली उहिलेका राजाहरुभन्दा पनि शक्तिशाली नेत बन्न लागेका हुन् ?
ओली दिल्ली पुग्नुअघि नै नयाँदिल्लीको गुलमोह पार्कस्थित आफ्नै निवासमा कुरा गर्दै पूर्वभारतीय राजदूत रञ्जितरायले भनेका थिए- ओलीजी त राजा महेन्द्रभन्दा पनि शक्तिशाली बनेर निस्किए । पार्टी एकता गराउन सके भने उनी शताव्दीकै बलियो नेपाली नेता बन्न सक्छन् ।
केपी ओलीको यसपटकको भ्रमणका क्रममा दिल्लीमा भेटिएका नेपालबारे चासो राख्ने र जानकारी राख्नेहरुको प्रश्न ओलीको आशन्न चीन भ्रमण, पाकिस्तानी प्रधानमन्त्रीको नेपाल भ्रमण र ओली शक्तिशाली बन्दै गइरहेको सन्दर्भमै केन्दि्रत थिए । त्यसबाहेक उनीहरुले अब नेपाल भारत सम्बन्धमा कोर्ष करेक्सन हुन लागेको टिप्पणी गरे ।
रञ्जित रायजस्ता कुटनीतिज्ञहरु अझै पनि नेपालले संविधानलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । तर, अब स्थिर सरकार बनिसकेको अवस्थामा भारतले नेपालको आन्तरिक विषयमा इंगेज हुने भन्दा पनि आर्थिक एजेण्डामा सहकार्य गर्नुपर्ने पक्षमा भारतीयहरु एकमत देखिएका छन् । यद्यपि चीनसँगको नेपालको निकटता भने दिल्लीमा अझैसम्म तनावकै विषय बन्ने गरेको छ ।
भारतीय मिडियाका हेडलाइनमा नेपालका प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको न्युज बन्दा पनि चीन जोड्नु अनिवार्य देखिन्छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रश्न सोध्ने भारतीय पत्रकारले पनि चीनसँगको निकटतामै केन्दि्रत गरिरहेका थिए । जबकि प्रधानमन्त्रीले उनीहरुलाई यतिमात्र जवाफ दिए-लेट देम टक ।
ओलीको भारत भ्रमणका क्रममा दिल्लीका विभिन्न औपचारिक तथा अनौपचारिक समारोहमा भेट भएका मन्त्री, नेता र कुटनीतिज्ञसँग नेपाल भारत सम्बन्धको अबको चरणबारे लिइएको प्रतिक्रिया जस्ताको तस्तै प्रस्तुत गरिएको छ ।
ओली राजा महेन्द्र भन्दा शक्तिशाली बन्दैछन्: रञ्जित राय, नेपालका लागि पूर्वभारतीय राजदूत
हामीलाई त खुशी लागेको छ । नेपालका नयाँ प्रधानमन्त्री सम्माननीय केपी शर्मा ओलीको पहिलो विदेश भ्रमण भारतबाट सुरु भएको छ । यसले पनि के दर्शाउँछ भने दुई देशबीचको सम्बन्ध कति महत्वपूर्ण छ ।
प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ओलीजीको सम्बृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली भन्ने अभियान आफ्नो सबका साथ सबका विकास भन्ने अभियानसँग परिपूरक भएको बताउनुले धेरै राम्रो संकेत गरेको छ । विगतमा केही महिना पहिले द्वीपक्षीय सम्बन्धमा केही मिस अण्डरस्टाण्डिङ थियो ।
अब यो भ्रमणसँगै नयाँ अध्याय शुरु भएको छ । बिगत बिर्सेर भविष्य निर्माणमा लाग्ने बेला हो यो । ओलीजीलाई संसदमा अपार समर्थन मिलेको छ । उहाँलाई संसदमा ८० प्रतिशत समर्थन प्राप्त भएको छ ।
उहाँ बलियो नेता बन्न चाहिरहनुभएको छ । साँच्चै भन्ने हो भने उहाँ त राजा महेन्द्रपछिकै शक्तिसाली नेता बन्न लागेको देख्छु म त । मलाई लाग्छ अब नेपालमा स्थायित्व हुन्छ । र, विकास हामीहरुको उद्देश्य छ । सबैको साथ, सबैको विकास नै हो । यसमा अब दुवै देश अग्रसर हुन्छन् ।
नेपालको आन्तरिक मामिलामा दख्खल नदिउँ: केभी राजन, नेपालका लागि पूर्व भारतीय राजदूत
प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमण धेरै अर्थमा महत्वपूर्ण थियो । उहाँले जुन जनमत प्राप्त गरेर प्रधानमन्त्री बन्नुभयो,अब नेपाल स्थायित्वतर्फ जानेछ । उहाँ त नेपालका पहिलेका राजाभन्दा पनि बलियो नेता बन्दै हुनुहुन्छ । जनसमर्थन उहाँलाई छ । अब भारतसँग नेपालको सबन्ध बलियो बनेको छ ।
यसबीचमा केही असमझदारी थिए भने पनि अब त्यो कोर्ष करेक्सनको चरणमा पुगेको देखिरहेको छु । म त नेपाललाई सबैभन्दा माया गर्ने मान्छे हुँ । नेपालसँगको मेरो नाता अटुट छ । भारत र नेपालको नाता पनि त्यतिकै अटुट रहनेछ ।
अब नेपालको विकास र सम्बृद्धिको जुन एजेण्डा ओलीजीले अघि सार्नुभएको छ,त्यसमा भारत सहयोगी बन्नुपर्छ । भारतले अब नेपालको राजनीतिक मामिलामा दख्खल अन्दाज गर्नु हुदैन ।
ओली बलियो नेताका रुपमा उदाउँदैछन्: जनरल अशोक मेहता, नेपाल मामिला विज्ञ
मैले यो त धेरै राम्रो देखिरहेको छु कि ओलीजी र मोदीबीच धेरै गहिराईमा पुगेर छलफल भएको छ । मैले सुने अनुसार ओलीजीले भारतले प्रतिवद्धता अनुरुप काम नगरेकोमा अशन्तुष्टि जनाउनुभएको छ ।
मोदीजीले अब विगतलाई भुलेर नयाँ ढंगबाट मिलेर काम गर्ने कुरा गर्नुभएको छ । उहाँले त अब सम्बन्ध नै नयाँ युगमा प्रवेश गरेको भन्नुभएको छ । ओलीजीले प्रश्न गर्ने र मोदीजीले जवाफ दिनुपर्ने स्टेजमा यो भ्रमण भएको छ ।
अब मोदीजी र ओलीजी मिलेर काम गर्ने आधार बनेको छ । नेपालमा अेालीजी बिगतका राजाहरुभन्दा पनि बलियो नेताका रुपमा उदाउनुभएको छ । उहाँलाई झण्डै दुई तिहाई बहुमत प्राप्त भएको छ ।
माओवादीहरुलाई सँगै लिएर जानुभएको छ । दुवैतिर बलियो सरकार र बोल्डर नेतृत्व रहेको अवस्थामा नेपालको विकास हुने सम्भावना देखिन्छ । अब कामको परिणाम हेर्ने बेला छ ।
ओली र मोदीका नारा परिपूरक: रविशंकर प्रसाद, भारतीय कानूनमन्त्री
प्रधानमन्त्री ओलीजीलाई भारतले उच्च सम्मान दिएको छ, यसको कारण यो पनि हो कि हामी अब नेपालसँगको सम्बन्धलाई नयाँ युग अनुसार एक अर्काको लाभमा विकास गर्न चाहान्छौं । यो सम्बन्ध समय अनुसार अरु प्रगाढ हुनेछ ।
म यो भन्छु, जबसम्म काठमाडौंमा पशुपतिनाथजी विराजमान छन् र हिमालयमा केदारनाथ छन्, तबसम्म भारत र नेपालको दोस्ती र मित्रता हमेशा स्थायित्व हुनेछ ।
जबसम्म नेपालमा पशुपतिनाथ र काशीमा विश्वनाथ छन्, तबसम्म हाम्रो सम्बन्धको गहिराइ अझ बढ्नेछ । जबसम्म नेपालमा पशुपतिनाथ र कश्मिरका पहाडमा अमरनाथ छन्, तबसम्म कुनै समस्या छैन ।
अचेल म पनि टीभीमा नेपाली च्यानल हेर्छु । गणेशको भक्ति संगीतले धेरै प्रभावित पार्छ । हामी यसरी बाँधिएका छौं र अझ हामी मबजुत सम्बन्धमा गाँसिन चाहन्छौं । म एकमात्र भन्न सक्छु, यो भ्रमणले सम्बन्ध अझ माथि लगेको छ । मोदीजीले भनिसक्नुभएको छ-नेपालको प्रधानमन्त्री ओलीजीको नारा र हाम्रो नारा अब परिपूरक भएका छन् ।
रामायण सर्किट र बुद्ध सर्किट बन्छ: सुरेश प्रभु, भारतीय वाणिज्यमन्त्री
प्रधानमन्त्री केपी ओलीको यसपटकको भारत भ्रमण बिगतका भ्रमणहरुको निरन्तरतामात्र होइन । हामीले अब नयाँ ढंगले सोचेका छौं ।
हाम्रो सम्बन्ध अन्त काहिँ पनि तुलनायोग्य छैन । हिजो पनि सम्बन्ध बिग्रिएको थिएन, तर केही समस्या आएका थिए, अब ती बिर्सनलायक छन् । जलमार्ग र रेलमार्गको कनेक्टिभिटीमा हामी नजिक छौं ।
काठमाडौं र रक्सौल रेल बनाउनेलगायतका महत्वपूर्ण सहमति भएका छन् । नेपालमा लगानी बढाएर रोजगारी सिर्जना गर्न, नेपाली युवाको क्षमता विकास गर्न र धार्मिक सर्किट बनाउन हामी खोज्दैछौं । हाम्रो प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले रामायण सर्किट र बुद्ध सर्किटको कुरा गर्नुभएको छ ।
अब त्यसमा हामी केन्दि्रत हुनेछौं । अर्को साता नेपालका बाणिज्यमन्त्री मात्रिका यादवजीसँग दिल्लीमा हामी कुरा गर्दैछौं । प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणले सम्बन्धमा नयाँ च्याप्टर ओपन गरेको छ । हामी नेपालसँग विश्वासको सम्बन्ध बनाउन चाहान्छौं ।
ओलीको प्रश्नमा मोदी गम्भीर बन्नुभएको छ: जनरल भिके सिंह, भारतीय विदेश राज्यमन्त्री
नेपालसँगको सम्बन्धलाई नयाँ युगमा प्रवेश गराएको छ, यो पटकका ओलीजीको भ्रमणले । दुवै प्रधानमन्त्रीबीच दुई चरणमा एक्ला एक्लै वार्ता भए । खुलेर कुरा भएका छन् ।
विश्वासको आधार बनाउनुपर्छ भन्ने ओलीजीको भनाइमा मोदीजी गम्भीर हुनुभएको छ । हामीले विगतमा भएका सम्झौता अनुसार किन काम गर्न सकेनौं भन्ने अब दुवै पक्षका मेकानिज्म बसेर समीक्षा हुनेछ ।
नेपालको आन्तरिक राजनीतिक मामिलामा भारतले कुनै दख्खल अञ्दाजी गर्न चाहँदैन भन्ने कुरा हामीले प्रष्ट पारेका छौं । अब नेपाल र भारतको समृद्ध आर्थिक समृद्धि र विकासमा एक अर्काको सहयोगी बन्नेतर्फ अघि बढेको छ । दुवै प्रधानमन्त्रीले संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा जे बोल्नुभएको छ, अबको हाम्रो यात्रा त्यसैतर्फ अघि बढ्नेछ ।
कोर्स करेक्सन जरुरी थियो: मणिशंकर ऐयर, पूर्वविदेशमन्त्री तथा कांग्रेस आइ नेता
नेपाल भारत सम्बन्धमा कोर्स करेक्सन जरुरी थियो । हामीले मधेस आन्दोलनको बहानामा मोदी सरकारले नेपालमाथि सीमानामा लगाएको अघोषित नाकाबन्दीको त्यतिबेलै बिरोध गरेका थियौं । त्यो समाधानको बाटो थिएन । मोदीजी अहिले कोर्ष करेक्सनको चरणमा पुगेका हुन् भने त्यो राम्रो कुरा हो ।
हामी सबै छिमेकीसँग सम्बन्ध सुधार हुनुपर्छ भन्छौं, त्यसमा पनि नेपालसँगको सम्बन्ध बिग्रनु भनेको भारतको हितमा हुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता हो ।
ओलीजी जुन जनमत लिएर प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ, उहाँको विकास र समृद्धिको भिजन पूरा गर्न भारतले पनि सहकार्य गर्नुपर्छ । –अनलाइनखबरबाट साभार
OMG! पूर्वी चितवनमा भएको दुख:द दुर्घटनाको तस्विरले रुवायो सबैलाई
भर्खरै नेपाल प्रहरीलाई यत्रो ठुलो सफलता – हेर्नुहोस को को परे फन्दामा !
काठमाण्डौं नै केन्द्रविन्दु बनाएर गयो भूकम्प
नेपालमा एकैदिन १० हजार बढी संक्रमण पुष्टि
बेल्जियमबाट नेपाल आएका यी व्यक्तिकाे अक्सिजन लेवल घटेर अस्पताल खोज्दा नपाएपछि…